‘महिला नेतृत्व आउँदा देश शान्तिमय बन्छ’ |
‘महिला नेतृत्व आउँदा देश शान्तिमय बन्छ’
प्रकाशित मिति :2017-05-01 19:55:03
दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको विषयले ठूलो चर्चा पाएको छ । चुनाव नजिकिएसँगै दलहरु उम्मेदवार छनौट र अन्य चुनावी गतिविधी गर्दै आफ्नो प्रभाव फैलाउन व्यस्त हुन थालेका देखिन्छन् । विभिन्न ठाउँमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने कतै महिला उम्मेदवारका विषय अन्यौलमा परेका देखिन्छन् । यसै सन्र्दभमा महिला नेतृत्वको आवश्यकता र यसले हिंसा न्यूनिकरणमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी नागरिक समाजका अध्यक्ष दोलख बहादुर पछाईसँग गरिएको छोटो कुराकानी ।
दोलख बहादुर पछाई
अध्यक्ष, नागरिक समाज, कपिलवस्तु
नेतृत्वमा महिला हुनु किन आवश्यक छ ?
महिलाहरु अहिलेसम्म धैरै अवसरबाट वन्चित भैरहेको अवस्थामा नयाँ संविधानमा महिलाहरुलाई समान अवसर दिने कानुन बनेको छ । यसको उपयोग गर्नका लागि महिला नेतृत्व आवश्यक छ । महिलाले नेतृत्व लिने मात्र होइन । पुरुष नेतृत्वले भन्दा पनि राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । यसरी नै नेतृत्व हुँदै गएमा स्वतः महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित हुँदै जान्छ । यसले गर्दा समाजमा जुन खालको विभेद छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ । महिला र पुरुष बिच रहेको खाडलको निराकरण हुन्छ । राज्यको पुर्नसंरचनामा संविधानले जुन खालको अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार महिलाले प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । दल, विभिन्न संघसंस्था र मिडियाका साथै घरपरिवारले पनि महिलालाई नेतृत्वमा आउनका लागि वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक छ ।
देशमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको जनसंख्या छ । महिलाका धैरै समस्या छन्, त्यस्ता समस्याबाट मुक्त हुनका लागि पनि महिलाको नेतृत्व अनिवार्य छ । महिला नेतृत्वमा आउँदा घर, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ । महिलाको लगनशीलता, इमान्दारिता, सहनशीलता र सुशासनले राष्ट्रलाई विकास उन्मुख गराउन ठूलो सहयोग गर्छ । अर्कोतर्फ, महिलाहरु नेतृत्वमा आउँदा देश पनि शान्तिमय बन्छ । राष्ट्रमा सद्भाव कायम गर्न पनि महिला नेतृत्वले ठूलो भूमिका खेल्छ ।
महिलालाई नेतृत्वमा आउन सहज देखिँदैन । कस्ता कठिनाइ देख्नुहुन्छ ?
हो, महिलालाई नेतृत्वमा आउन पक्कै पनि कठिनाइ छ । महिलाले दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारी वहन गर्दै आएकोले नेतृत्वमा आउँदा पक्कै पनि कठिनाइ हुन्छ नै । सबै महिला ती जिम्मेवारी वहन गर्दै आउन सक्दैनन् । एउटी महिलाले छोरा छोरी जन्माउने, स्याहार सुसार गर्ने, घरपरिवारको हेरविचार गर्दै नेतृत्वमा आउनु भनेको पक्कै पनि चुनौति नै हो । यहिकारण सबै महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । घरपरिवार अनि समाजले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने गर्छ ।
त्यसो भए कसरी नेतृत्व बढाउन सकिन्छ त ?
सर्वप्रथम त महिलालाई घरपरिवारबाट बाहिर आउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । महिलाले बिहान ४ बजेदेखि साँझ १० बजेसम्म घरमा काम गर्छिन् तर, उनको मुल्याँकन छैन । उनकै श्रीमानले मेरो श्रीमती ‘हाउस वाइफ’ हो भन्छन् । यस्तो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, घर परिवारमा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिनुपर्छ । समाजले पनि महिलालाई अगाडि बढाउन प्रेरणा दिनुपर्छ । राजनैतिक दलहरुले पनि अवसर दिँदै सहयोग पुर्याउनुपर्छ । राज्यले महिला नेतृत्वका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । स्वयं महिलाले पनि अध्ययनशील बन्दै अधिकारका कुराहरु बुझ्दै सक्रियतापूर्वक नेतृत्वमा आउन कोशिस गर्नुपर्छ । संघसंस्था, दल सबैले महिलालाई अगाडि बढाउन अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
जिल्लामा महिला हिंसाको अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ । यस्तोमा महिला नेतृत्व आउँदा के फरक पार्छ ?
धेरै फरक पार्छ । महिलाहरु कुनै न कुनै प्रकारका हिंसाबाट पीडित छन् । त्यस्ता हिंसामा परेका महिलाहरुलाई न्यायमा सहयोग पुर्याउन पनि महिला नेतृत्व आवश्यक छ । महिलाको पीडालाई महिलाले नै गहिरिएर बुझ्न र हेर्नसक्ने हुँदा पनि उनीहरु नेतृत्वमा आउँदा हिंसा कम हुनसक्छ । महिला नेतृत्वले लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण पनि गर्छ । अर्को, महिला नेतृत्वमा पुग्दा पीडित महिलाहरुमा साहस आउँछ । जति महिलासँग महिलाहरुले कुरा राख्न सक्छन्, पुरुष नेतृत्वसँग उनीहरु खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् । यसकारण पनि महिला नेतृत्व अपरिहार्य छ । महिलाहरु नेतृत्वमा नपुग्दा पीडित महिलाहरुले जुन खालको न्याय पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाएको अवस्था छ ।
फेरी, पुरुष नेतृत्वमा आफ्ना कुरा राख्न अप्ठ्यारो महशुस हुने हुनाले पीडा सहेर बस्न बाध्य भएका घटनाहरु हामी सुन्ने, देख्ने गर्छौं । त्यसबाट पनि मुक्त हुनका लागि महिला नेतृत्व आवश्यक छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले कन्जुस्याँई नगरिकन महिलाहरुलाई नेतृत्व दिनका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्छ । महिलाले कामको जिम्मेवारी पाएपछि आफ्नो मेहनत र सबैको सहयोग लिने वातावरण आफैं सृजना गर्नुपर्छ । त्यसोगर्दा, महिला नेतृत्व अघि बढ्न सक्छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोही अनुरुपको वातावरण सृजना गर्न दलहरु र स्वयं महिला आफैंले पनि पहल गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनपछि बढी भन्दा बढी महिला नेतृत्व आएमा महिलामाथि हुने हिंसा पनि स्वतः कम हुँदै जान्छ । कपिलवस्तु जिल्लामा महिलामाथि धैरै नै हिंसा हुने गर्छ । खासगरी दाइजो नल्याएको कारण श्रीमतीलाई विवाह दर्ता नगरिदिने, नागरिकता नबनाइदिने, मदिरा सेवन गर्ने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने लगायतका थुप्रै घटनाहरु हुने गरेका छन् । यसबाहेक, यौनजन्य हिंसा पनि हुने गरेको छ । हिंसामा परेका पीडितहरुलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन पनि महिला नेतृत्व आवश्यक छ ।
आउँदो वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । यहाँ १० वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यी सबै तहहरुको प्रमुखमा महिला आउन सकेमा महिलामाथि हिंसा कम हुन्छ । यसको लागि दलहरुले जित्ने स्थानमा महिलाहरुलाई अवसर दिनुपर्छ ।
(प्रस्तुतिः पार्वती पाण्डे/ कपिलवस्तु)